हङकङमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु
तपाईको नानीहरु यतिबेला किण्डरगार्टेन ३ कक्षामा अध्ययन गरिरहेका छन् र आउँदो वर्ष प्राथमिक १ कक्षामा भर्ना हुनगइरहेका छन् भने यति बेला तपाईहरुले शैक्षिकशत्र २०१५–१६ कक्षा १ भर्ना फारम प्राप्त गरिसक्नु भएको छ । विशेषगरी पूर्ण सरकारी र सरकारी अनुदानले संचालन भएका विद्यालयहरुमा भर्ना चाहानेहरुका लागि फारम भर्ने मिति सेप्टेम्बर २२ – २६ तारिखसम्म आफूले चाँहेको विद्यालयमा गएर बुझाउन सकिन्छ ।
फारम बुझाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
फारम भर्ने समयवधिमा फारम भर्नु पर्ने छ । आफूलाई मन परेको एकमात्र विद्यालयमा फारम बुझाउनु पर्ने छ । यदि १ भन्दा बढी विद्यालयमा तपाईले फारम बुझाउनु भयो भने डबल इन्ट्री भई शिक्षा विभागले तपाईको फारमलाई रद्द गर्छ । तपाईलाई धेरै नै समस्या आउँछ ।
के मैले फारम भरेको विद्यालयमा मेरो बच्चालाई भर्ना मिल्छ त ?
–– तपाईले फारम भरेको विद्यालयमा तपाईलाई भर्ना मिल्छ नै भन्ने चाँहि हुँदैन किन भने धेरै विधार्थीहरुले ती विद्यालयहरुमा तपाईहरुले जस्तै फारम भरेको पनि हुनसक्छ । सम्बन्धित विद्यालयलाई निश्चित भर्ना संख्या तोकेको हुन्छ । उनीहरुले पनि चाहेर भर्ना लिन सक्दैनन् । तपाईको नाम पहिलो चरणमा निस्केन भने तपाईलाई दोश्रो चरणको फारम भर्ने समय आगामी जनवरी महिनामा पुनः आउँछ त्यसबेला तपाई १ भन्दा धेरै विद्यालयको कोड नम्बर भर्नु पर्ने छ ।
मेरो नानीले विद्यालयमा स्थान पाए नपाएको कसरी थाहा पाउने ?
–– तपाईको नानीले विद्यालयमा स्थान प्राप्त गरे नगरेको थाहा पाउन नोभेम्बर महिनासम्म पर्खनु पर्दछ । नोभेम्बर महिनामा यसको परीणाम प्रकाशित हुन्छ । तपाईले चाहानु भएको विद्यालयमा नानीको नाम निस्किएमा आगामी वर्ष १ कक्षाकालागि त्यस विद्यालयमा स्थान सुरक्षित भयो । नाम प्रकाशित भएन भने जनवरी महिनामा पुनः फारम भर्ने । जुन महिनामा त्यसको रिजल्ट प्रकाशित हुन्छ ।
कस्तो विद्यालय मेरो नानीहरुकोलागि उपयूक्त हुन्छ ?
–– नानीहरुको भविष्य निर्धारण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण घडी यहि हो । कृपया झुक्किएर पनि चीना पढाउने निहुँमा आफ्ना नानीहरुलाई चाईनीज माध्यमको स्कुलमा नाम नपठाउनुहोला । किनभने माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक, युनिभर्सीटीहरु सबै अंग्रेजी माध्यमका हुन्छन् । यसको मतलब चीना भाषा नपढ्ने भन्ने होइन । यदि तपाई घरमा चीना भाषा पढाउन सक्नुहुन्छ भने, ३ कक्षा माथि पुगेपछि पनि क्यान्टोनिज मेरोलागि समस्या होइन भन्ने लाग्छ भने चाईनीज माध्यमको विद्यालय पनि तपाईको लागि केही समस्या होइन । त्यसैले अंग्रेजी माध्यमको विद्यालयहरु वा यस अघि डेजिगनेटेड विद्यालय रहेका विद्यालयहरु जहाँ अंग्रेजी, गणीत, जीएस जस्ता कोर विषयहरु अंग्रेजी माध्यममा पढाइहुन्छ त्यस्ता विद्यालयहरुमा भर्ना गर्न सकिन्छ । त्यस्ता विद्यालयहरुमा चीना (क्यान्टोनिज) भाषा पनि कोर विषयको रुपमा पढ्नु पर्ने हुन्छ । नानीले राम्ररी चीना पनि सिक्न सक्छ ।
न्यू टेरीटोरिज क्षेत्रमा रहनु भएका अभिभावकहरु विशेषगरी युनलङ, कामतिन, तिन शुई वाई लगायतका क्षेत्रमा रहनु हुन अभिभावकहरुलाई विशेष अनुरोध कृपया आफूले चाहेको विद्यालयमा बेलैमा फारम बुझाउनु होला । किनभने क्रस बोर्डर विद्यार्थीहरु यस वर्ष ३ हजार कक्षा एकमा भर्ना हुन आएका छन् । आगामी वर्ष ५ हजार पुग्ने शिक्षा विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसको प्रत्यक्ष असर चाँहि हामी एनसीएस विधार्थीहरुलाई पर्दछ । विधार्थीहरुको चाप कउलुन, हङकङ आइल्याण्डलाई पनि पर्नेछ ।
थप जानकारी चाहिएमा